Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba Eziphambili zaseHawaii » Iiholide zeholide eHawaii ziphezulu ngoku
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba Eziphambili zaseHawaii • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Iindaba zeLuxury • iindaba • abantu • Resorts • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Irenti yeholide ichazwa njengosetyenziso lwendlu erentwayo, iyunithi yekhondom, igumbi labucala kwikhaya labucala, okanye igumbi/indawo ekwabelwana ngayo kwikhaya labucala.
Irente yeholide yaseHawaii kwilizwe lonke inike ingxelo yokonyuka okukhulu kubonelelo, imfuno, ukuhlala kunye nereyithi yemihla ngemihla (ADR) ngo-Okthobha wama-2021 xa kuthelekiswa no-Okthobha wama-2020.
Nangona kunjalo, xa kuthelekiswa no-Okthobha ka-2019, i-ADR yayiphezulu ngo-Okthobha ka-2021, kodwa ukubonelelwa ngerenti ngexesha leholide, imfuno kunye nokuhlala bekuhlile.
NgokweNgxelo yeNtsebenzo yokuRenta iHolide yaseHawaii yamva nje, ngo-Okthobha ka-2021, unikezelo lwenyanga lulonke lwerenti yeholide kwilizwe lonke yayingama-587,700 ubusuku beyunithi (+57.3% vs. 2020, -38.1% vs. 2019) kwaye imfuno yenyanga ibiyi-345,700 yobusuku beyunithi (+ 306.7% vs. 2020, -49.9% vs. 2019). Oko kubangele i-avareji yenyanga yokuhlala iyunithi ye-58.8 ekhulwini (+ 36.1 amanqaku epesenti vs. 2020, -13.8 ipesenti yamanqaku vs. 2019) ngo-Oktobha. Ukuhlala kweehotele zaseHawaii bekungama-54.9% ngo-Okthobha.
I-ADR yeeyunithi zokurenta iholide kwilizwe lonke ngo-Oktobha ibiyi-$243 (+16.9% vs. 2020, +26.9% vs. 2019). Xa kuthelekiswa i-ADR yeehotele ibiyi-$308 ngo-Okthobha ka-2021. Kubalulekile ukuqaphela ukuba ngokungafaniyo neehotele, iiyunithi kwirenti yeholide azifumaneki unyaka wonke okanye usuku ngalunye lwenyanga kwaye zihlala zihlalisa inani elikhulu leendwendwe kunamagumbi ehotele aqhelekileyo. .
Ngo-Okthobha, iirenti zexeshana ezisemthethweni zavunyelwa ukuba zisebenze eMaui County nase-Oahu, eHawaii Island naseKauai ukuba nje zingasetyenziswa njengendawo yokuvalelwa.
Ngo-Okthobha ka-2021, abakhweli abafika bevela ngaphandle kwelizwe banokudlula kwisigunyaziso sikarhulumente sokuzihlala bodwa iintsuku ezili-10 ukuba baye bagonywa ngokupheleleyo e-United States okanye ngeziphumo zovavanyo ezisebenzayo ze-COVID-19 ze-NAAT ezivela kwiQela eliThenjiweyo loVavanyo ngaphambi kokuba ukumka kwabo ngenkqubo yeeHambo eziKhuselekileyo.
Idatha kwi Igunya lezokhenketho laseHawaii's Ingxelo yokuSebenza kweRenti yeHolide yaseHawaii ayibandakanyi ngokukodwa iiyunithi ezixelwe kwiNgxelo yokuSebenza yeHotele yaseHawaii kunye neNgxelo yoPhando lwekota yeHawaii. Irenti yeholide ichazwa njengosetyenziso lwendlu erentwayo, iyunithi yekhondom, igumbi labucala kwikhaya labucala, okanye igumbi/indawo ekwabelwana ngayo kwikhaya labucala. Le ngxelo ayimiseli okanye ihlule phakathi kweeyunithi ezivumelekileyo okanye ezingavumelekanga. Ukuba semthethweni kwayo nayiphi na iyunithi yerenti enikiweyo yeholide imiselwa ngokwesiseko selizwe.